Game & Software Zone Myanmar
G & S MM
All Racing Action Casual Horror Arcade Simulation Strategy Sports Adventure 21 + Fighting PPSSPP. Open World Puzzle
How much you like Swordigo Mod Apk?
Swordigo Mod Apk ( No Ads , Enabled Compass )
Gameplay - Action / RPG
ဒီတစ်ခါတော့ Offline File Sizeနည်းနည်းနဲ့
ဆော့လို့ကောင်းမယ့် Gameအသေးလေးတစ်ခုတင်ပေးပါ့မယ်ဗျ တော်တော်များများဆော့ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်ငယ်က ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Gameတစ်ခုပါ
Touch Fooဆိုတဲ့ Developerတွေကထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိထားတာပါ Platformer Rpg Gameတစ်ခုဖြစ်ပြီး 2.5D Graphicကိုအသုံးပြုထားတာပါ
StoryLineကတော့ သင်ဟာရွာငယ်လေးတစ်ခုမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေတာပါ
ဆွေမျိုးမရှိဘဲ ဆရာကြီးတစ်ယောက်ဆီမှာ ပညာသင်ရင်းနေတာပါ တစ်နေ့မှာတော့ သင့်ဆရာဟာ တောထဲကိုသွားရင်း တော်တော်နဲ့ပြန်မလာ‌ပါဘူး စိတ်ပူတာနဲ့ဆရာကြီးကိုသွားရှာတဲ့အခါမှာတော့ တောထဲမှာ Demonတစ်ကောင်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံထားရတဲ့ ဆရာကြီးကိုတွေ့ရမှာပါ သေခါနီးစဲစဲဖြစ်နေပြီး ‌သင့်ကို Demonရဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြီး လူသားမျိုးနွယ်ကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်
သင့်ကိုလည်း Magicသုံးနည်းရှင်းပြသွားပါတယ် အဲ့အချိန်မှာပဲ Demonကောင်ရောက်လာပြီး သင့်ကိုပါ Dark Magic Powerသုံးပြီး သတ်သွားပါတော့တယ်
ဒါပေမယ့် ကံကောင်းချင်တော့ ရွာမှာရှိတဲ့ Healerကသင့်ကို တွေ့ပြီးကယ်တင်လိုက်ပါတယ် ဆရာကြီးကိုတော့ မကယ်လိုက်နိုင်ပါဘူး
သင်ပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ ဆရာကြီးအတွက်လက်စားချေဖို့ရယ် လူသား‌တွေဒုက္ခမရောက်ဖို့ရယ်အတွက် Demonဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကိုလိုက်ရှာရပါတော့မယ်
Platformer Gameဖြစ်တာကြောင့် Controlမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ လုပ်ပေးထားပါတယ်
တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ ဓားကိုင်ပြီး Basic Attack နဲ့ချလို့ရသလို အဝေးကနေ Magic Powerလည်းသုံးလို့ရပါတယ်
အဝေးပစ်ရန်သူတွေရဲ့ Spellကိုလည်းဓားနဲ့ခုတ်ပြီး သူ့ဆီပြန်ရောက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်
RPG TYPEဖြစ်တာကြောင့် ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ အကောင်ဗလောင်တွေ အန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်းရင်း ဆော့ရမှာပါ
MAGIC POWERအသစ်တွေကို ၀ယ်လို့ရပါသေးတယ် Health Potion / Mana Potionလည်း၀ယ်နိုင်ပါတယ်
ဒီ Gameမှာတော့ Goldတွေ Shardတွေမခိုးထားပါဘူး ခိုးရလောက်အောင်လည်း ခက်တဲ့ Gameမဟုတ်ပါဘူး‌ ဆော့ရင်းနဲ့ရသွားမှာပါ
ခိုးရင် ဆော့မရတာ ဖုန်းနဲ့မကိုက် အဆင်မပြေတာတွေ ရှ်ိနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် Adတွေမပါအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်
ပြီးတော့ ဆော့ရင်းဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ လည်နေရင် Compassလေးဖွင့်ပြီး သွားရမယ့်‌နေရာ လုပ်ရမယ့် Missionကိုကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်
နောက်ထွက်တဲ့ Gameတွေလောက် Graphicမကောင်းပေမယ့် Smoothဖြစ်တဲ့ Control
သင့်တင့်တဲ့ Brightnessတွေကြောင့် ဆော့ပျော်ပါတယ် ငယ်ငယ်ကဆော့ဖူးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း Memoriesလေးတွေကို ပြန်တမ်းတလို့ရပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆော့နေတာပါ တော်လှန်ရေးကာလကြီးမှာ စိတ်ပန်းလူပန်းနေတဲ့အချိန် နည်းနည်း‌လေးတော့ စိတ်သက်သာရာရမှာပါ
Review By Game Tip
Please Wait 15 စက္ကန့်
291 Users Download This Game
Sniper Strike M...
Swordigo Mod Ap...
Titan Quest Mod...
Nova Legacy Mod...
Copyright ©2021 All rights reserved | This Website is Created by Aung Htet Chon